05/06/2018 - Page 4 sur 4 -
05/06/2018 admintriatra 0
Notendren’ny Filoham-pirenena , omaly, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny Praiminisitry ny marimaritra iraisaina, di I Ntsay Christian. Anarana natolotry ny vondrona politika Mapar izy io. Mazava izany izao fa ny Mapar no nanolotra ny Praiminisitra …Tohiny
Milaza hanendry praiminisitra indray ireo solombavambahoaka eny an-dalambe androany. Midika ve izany hoe tsy manaiky ny praiminisitra vao notendrena omaly izy ireo? Asa aloha izay tena marina fa dia io fanendrena praiminisitra an-dalambe io izany …Tohiny
Mitokona tsy mety hiverina hampianatra ny mpampianatra, izay milaza fa manao fitakiana hafa indray eny amin’ny EPP Antanimbarinandriana. Taorian’ny fitakiana naharitra iray volana mahery teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai tarihin’ny sendikan’ny mpampianatra, dia fantatra fa ...Tohiny